ဆံပင်ပုံစံများ - Bezzia | Bezzia
ဆံပင်ပုံစံသည်အမျိုးသမီးများ၏ဗေဒတွင်နောက်ထပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့ဆံပင်ကိုဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်ပုံသည်ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းများစွာပြောလိမ့်မည်၊ ထိုအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဆံပင်ကိုခေတ်မှီပြီးသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ထားရှိသည်ဟုသင့်အားပြောစေချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆံပင်ပုံစံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားချက်လည်းဖြစ်သည်။
ဤအခန်းတွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဝတ်ဆင်နိုင်သောကွဲပြားသောဆံပင်ပုံစံများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆံပင်ကိုထူးခြားစေရန်အကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်ခြေလှမ်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
သတို့သမီးဆံပင်ပုံစံဖြေ - အချိန်နည်းနည်းနဲ့သင်စုစည်း (သို့) ကြည့်ရှုရမယ့်အရာတွေထဲကတခုဖြစ်တယ် သတို့သမီးဆံပင် မင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာ ၀ တ်ချင်တဲ့အကြောင်း၊ အနည်းဆုံးတစ်ပတ်မတိုင်ခင်သင်လုပ်နိုင်တဲ့စမ်းသပ်မှုတချို့၊ မင်းတို့ဝတ်ချင်တဲ့နောက်ဆုံးအသွင်အပြင်ကိုသိပြီးတဲ့အခါသင့်လျော်စွာရွေးချယ်နိုင်အောင်, ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာငါတို့ကိုမင်းတို့ပြသနေပါတယ်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ သတို့သမီးဆံပင် ဒီနှင့်အခြားရာသီများတွင်ဝတ်ဆင်ကြသည်, သင်၏စတိုင်နှင့်သင်၏မင်္ဂလာဆောင်မှသင်ပေးချင်သောလေထုပေါ်မူတည်။ စပျစ်သီးကို, ခေတ်သစ်သို့မဟုတ် retro ရှိမရှိ။
အမျိုးသမီးများအတွက်ဆံပင်ပုံစံအကယ်၍ မင်းကအမြဲတမ်းပြီးပြည့်စုံတဲ့ခံစားမှုကိုခံစားချင်တယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့မျက်နှာဟာအသွင်အပြင်နဲ့ပါးနပ်အရောင်နှစ်မျိုးစလုံးကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ ဒါကငါတို့ဒီမှာပြသနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအားကောင်းတဲ့> အမျိုးသမီးဆံပင်ပုံစံတွေထက်ဘာမှမပိုဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရာသီနဲ့မျက်နှာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်တယ်။ မင်းမှာရှိတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ် အမျိုးသမီးများအတွက်ဆံပင်ပုံစံ ဗဟိုသို့မဟုတ်တစ်ဖက်စောင်းနင်း Bang နှင့်အတူမညီမညာဖြစ်နေသောဖြတ်တောက်မှုအတွက်ပိုပြီးဂန္, ဒါမှမဟုတ် disheveled ။ ဤနေရာတွင်သင်အားလုံးတွေ့လိမ့်မည် အမျိုးသမီးများအတွက်ဆံပင်ပုံစံ ဆံပင်ကိုအမြစ်မှသည်အဆုံးအထိကျွန်ုပ်တို့အများဆုံးသိပြီးဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ဖက်ရှင်ဆံပင်ပုံစံ။ ရာသီဥတုအခြေအနေမှာခင်ဗျားတို့လုပ်နိုင်တဲ့ယောက်ျား၊ မိန်းမနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဖက်ရှင်ဆံပင်ပုံစံတွေအကြောင်းဒီနေရာမှာမင်းတို့ပြောနေတာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆောင်း ဦး ရာသီ၊ နွေရာသီ၊ ဆောင်းရာသီတို့နဲ့မတူတာပါ၊ အမျိုးမျိုး ဖက်ရှင်ဆံပင်ပုံစံ အထင်ရှားဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်သူများသည်ဂန္ထဝင်စတိုင်များ၊ မြင့်မားသော Buns များ၊ paraded ဖြတ်တောက်ခြင်းများနှင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ပါးစင့်များဖြင့်အမျိုးမျိုးသောဖက်ရှင်လမ်းလျှောက်လမ်းများပေါ်တွင်တင်ပြရန်ဝံ့ကြသည်။ ဘယ်ဟာလဲဆိုတာသိနိုင်ခြင်းကိုသင်နှစ်သက်လိမ့်မယ် ဖက်ရှင်ဆံပင်ပုံစံ နောက်ပြီးဘာဆက်လုပ်ရမလဲ
ဆံပင်ညှပ်ဖြေ - ငါတို့အများစုဟာအဲဒီလိုလုပ်ဖို့တစ်ချိန်ချိန်မရဲရဲကြဘူး ဆံပင်ညှပ် ငါတို့ကသူတို့ကိုအရမ်းကြိုက်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကနေသင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးပြသလို့ပဲ ဆံပင်ညှပ် ရာသီဥတုအပေါ် မူတည်၍ အများအားဖြင့်ယူရမည့်အရာများကိုသင်တွန်းအားပေးရန်ဖြစ်သည် ဆံပင်မှန်ကန်တဲ့အရောင်နဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ပုံစံနဲ့သင်ဝတ်ဆင်ရမယ့်ပုံစံနဲ့ပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤတွင်သင်အကောင်းဆုံးတွေ့လိမ့်မည် ဆံပင်ညှပ် သူတို့အတွက်ရောသူတို့အတွက်ပါမျက်နှာ၏အထင်ရှားဆုံးလက္ခဏာများကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်အလေးပေးခြင်း။
ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်၌အရာအားလုံးကိုလုပ်နိုင်ရန်သင်လှည့်ကွက်များကိုသင့်အားပေးမည်။ သင်၏ဆံပင်ကိုအကောင်းဆုံးအခြေအနေတွင်ထိန်းသိမ်းရန်အစေခံနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုသင့်အားအကြံပေးလိမ့်မည်။ ရာသီဥတုပေါ် မူတည်၍ တည်ရှိနေသောခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ပြသသောကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျော်ကြားမှုများမှာသူတို့သည်အမြဲတမ်းနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပွဲမှာ ဧည့်သည်တွေ လာလည်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကွဲပြားအောင် မြင်နိုင်စေဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေ ရှာကြည့်ကြတာပေါ့..။
ဆံပင်သည် မည်သူမဆိုအတွက် ကောင်းမွန်သော အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရှည် ၊ အတို ၊ တွန့် ၊ ဖြောင့် ပဲ ဖြစ်ဖြစ်...
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
မီးပူဖြင့်ဆံပင်ကိုဖြောင့်ခြင်းသည်တောက်ပကောင်းမွန်သောဆံပင်ကိုရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်လွယ်ကူသောကိရိယာများ ...
ရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက်အနည်းငယ်ဖြင့်မင်းဆံပင်ကိုလှိုင်းတွေကိုမြန်၊ ရိုးရှင်းပြီးအလွန်လက်တွေ့ကျသောနည်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ…
por Susana godoy လွန်ခဲ့တဲ့7လအတွင်း .
သငျသညျအသွင်အပြင်တစ်ခုပြောင်းလဲမှုအပေါ်လောင်းချင်ပေမယ့်ရှည်လျားသောဆံပင်ရှိသည်မဟုတ်လော ဒါဟာအရေးမပါဘူး, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆံပင်နှင့်အတူ ...
ဆံပင်ကောင်းခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ပြproblemsနာများစွာရှိပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်အသံပမာဏမများသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ ...
por စူစန်နာ Garcia က လွန်ခဲ့တဲ့ 8 လအတွင်း .
အလွှာရှိဆံပင်ပုံစံသည်ပြန်နေရန်ဖြစ်သည်။ ခဏတာပြီးနောက် ...
ဒီနွေ ဦး ရာသီပြည့်စုံသွားကြဖို့ဆံပင်ပုံစံတွေ
အဆိုပါတုံး Bob အသစ်ခေတ်မှီဆံပင်ညှပ်သည်
ဆံပင် - အိမ်တွင်ဆံပင်ရွှေရောင်ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေခြင်း
ထူသောဆံပင်အဘို့အ7အိမ်မှာကုစား